ပိုက်လိုင်းဖြင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့ရောင်းချနေသည့် နိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၃ နေရာသို့ရောက်ရှိ၊ ရတနာနှင့်ရဲတံခွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့နေ့စဉ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုဗပေ တစ်ဘီလျံကျော် ပို့လွှတ်ရောင်းချလျက်ရှိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ပိုက်လိုင်းဖြင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့ရောင်းချနေသည့် နိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၃ နေရာသို့ရောက်ရှိ၊ ရတနာနှင့်ရဲတံခွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့နေ့စဉ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုဗပေ တစ်ဘီလျံကျော် ပို့လွှတ်ရောင်းချလျက်ရှိ
ပိုက်လိုင်းဖြင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့ရောင်းချနေသည့် နိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၃ နေရာသို့ရောက်ရှိ၊ ရတနာနှင့်ရဲတံခွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့နေ့စဉ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုဗပေ တစ်ဘီလျံကျော် ပို့လွှတ်ရောင်းချလျက်ရှိ
Posted by kln on Jul 21, 2010 in News | 1 comment
ပိုက်လိုင်းဖြင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့ရောင်းချနေသည့် နိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၃ နေရာသို့ရောက်ရှိလာပြီး ရတနာနှင့်ရဲတံခွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့နေ့စဉ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ တစ်ဘီလျံကျော် ပို့လွှတ်ရောင်းချပေးလျက် ရှိကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ပိုက်လိုင်းဖြင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တင်ပို့ရောင်းချသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှစတင်ကာ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင် ပိုက်လိုင်းဖြင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့ရောင်းချသော ထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပိုက်လိုင်းဖြင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့ရောင်းချသော ထိပ်တန်းနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပိုက်လိုင်းဖြင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့ရောင်းချသည့်နိုင်ငံများတွင် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၃ တွင် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် ပါရှိသည့် ဖော်ပြချက်များ အရ သိရသည်။ ရတနာသဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေမှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တစ်နေ့လျှင် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကုဗပေ ၅၂၅ သန်းပို့လွှတ် ရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ရတနာသဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေ၊ စိန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေမှ ထွက်ရှိသည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ အပါအ၀င် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ နေ့စဉ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုဗသန်း ၇၀၀ ပို့လွှတ်ရောင်းချနေပြီး ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရားဝင်ချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်အရအနှစ် ၃၀ ပို့လွှတ်ရောင်းချရမည် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ တနင်္သာရီ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် ရဲတံခွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းကို မလေးရှားနိုင်ငံမှ ပက်ထရိုနပ်ကုမ္ပဏီ၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ နိပွန်ကုမ္ပဏီ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ PTTEPI ကုမ္ပဏီတို့က ရင်းနှီးမြှပ်နှံဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ရဲတံခွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေမှ ထုတ်ယူနိုင်မည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပမာဏမှာ ၃ ဒသမ ၆၇ ထရီလီယံ ရှိမည်ဟု ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းထားကြပြီး ယင်းနှင့်စပ်ဆက်၍ ရေနံစိမ်းအပေါ့စား Condensate စည် သန်းပေါင်း ၈၄ ဒသမ ၃၆ သန်းခန့် ထုတ်ယူရရှိနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြကြောင်း သိရသည်။ ရဲတံခွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေ မှ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလမှစတင်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တစ်နေ့လျှင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုဗပေသန်း ၂၀၀ ခန့် ပို့လွှတ်ရောင်းချပေးခဲ့ပြီး ယခုအခါ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေသန်း ၄၀၀ ခန့်အထိ တိုးမြှင့်ပို့လွှတ် ရောင်းချလျက်ရှိပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူ တစ်နေ့လျှင် ရေနံစိမ်းအပေါ့စား စည် ၁၂၀၀၀ ခန့်ထွက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်းတွင်းပိုင်းနှင့် ကမ်းလွန်ပိုင်းဒေသတို့တွင် ထုတ်လုပ်ဆဲ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေများမှ ရေနံစိမ်းနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပမာဏများကို တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်လျက် ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ မုတ္တမကမ်းလွန်ဒေသရှိ ရတနာနှင့် ရဲတံခွန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းများမှ ပြည်ပသို့ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်း၍ ရောင်းချနိုင်သကဲ့သို့ ဇောတိကသဘာဝဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်းမှလည်း သဘာဝဓါတ်ငွေ့များ မကြာမီထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အပိုင်းတွင် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခွဲဝေခံစားရေး အခြေခံမူဖြင့် ၂၀၁၀ မတ်လအထိ ကုန်းတွင်းပိုင်း ဒေသတွင် စာချုပ်ပေါင်း ၄၆ ခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းစာချုပ်များ အနက်မှ ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသ လုပ်ကွက် ၁၁ ခုတွင် စာချုပ် ၁၁ ခုနှင့် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် ၃၁ ခုတွင် စာချုပ် ၃၀ တို့မှာလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
If possible we would like to know the activities of production gas from DAEWOO CO. at Myanmar. And also the advantages of Myanmar people.
As for me 400 kyats for 1 hr at inter-cafe is;sometimes cannot afford. After reading this news ……our people’s education, health, social affairs….I got headache. I really do not want my people like to be North Korean. Woooooo….!!!!!!!!!!!!